कठोर व्यक्तिको छवि बनाएका रुसी राष्ट्रपति पुटिनका केहि बहादुरी रुपहरु…
January 19, 2018	Comments Off on कठोर व्यक्तिको छवि बनाएका रुसी राष्ट्रपति पुटिनका केहि बहादुरी रुपहरु…
विश्व शक्ति राष्ट्र मध्यको एक रुसीका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफुलाई एक कठोर व्यक्तिको रुपमा विश्वमाझ छवि बनाएका छन् । पुटिनलाई प्रसंशा गरिएका गीत त कहिले उनलाई रुसमा भगवान जस्तै मानिने कुराले उनी मिडियाहरुमा छईरहन्छन्। खासमा उनी अलिक फिल्मी अन्दाजमा र शाहसिक काम गरेको फोटो सुट गर्न पनि रुचाउछन्। कहिले नग्न शरीरसहित साइबेरियामा माछा मारिरहेको देखिन्छन् भने कहिले एक शाहसिक योद्धा …
अहिले सम्म अविवाहित रेखा आफ्नो सिउँदोमा कस्को नामको सिन्दुर लगाउछिन्?
January 19, 2018	Comments Off on अहिले सम्म अविवाहित रेखा आफ्नो सिउँदोमा कस्को नामको सिन्दुर लगाउछिन्?
बलिउडमा सुन्दर अभिनेत्रीका रुपमा चिनिने रेखाको सिन्दुरको रहस्य पुरानो हो । बलिउडमा अमिताभ बच्चन र रेखा संग जोडिएको खवरको सिलसिला आज सम्म पनि टुगिंन सकेको छैन् । आज पनि सिनेजगतमा यी दुई स्टारको नाम एक अर्का संग जोडेर दिने गरिन्छ ।उनले कसैको नामको सिन्दुर लगाउने गरेको राज अभिनेता इस्सर कि श्रीमती दीपाली इस्सरले खोलेकि छिन् । दीपालीका अनुसार रेखाले बिग …
म चाहे भने रविको बेईज्जत गर्न सक्छु : सोनिका रोकाया !!! को हुन् सोनिका ?
January 19, 2018	Comments Off on म चाहे भने रविको बेईज्जत गर्न सक्छु : सोनिका रोकाया !!! को हुन् सोनिका ?
सिधाकुरा जनतासंग’ कार्यक्रम मार्फत सरकारले गर्न नसकेका कार्य गर्दै , थुप्रै पिडितका अाँशु पुछदै,अन्यायमा परेकोहरुको न्यायको लागि एक्लै मरिमेट्न रवी लामिछानेलाई फेरी धम्की आएको छ । रवीलाई युट्युव चैनल ‘वाउ नेपाल’मा छाडा र पचाउनै नसकिने प्रश्न र गतिबिधि समाबेश गरिएका अन्तर्वाताका भिडियो प्रस्तोत गर्ने सोनिका रोकायाले धम्की दिएको हो । सोनिकाले रवी लाई बेईज्जत गर्ने धम्की दिएकि छिन् । को …
सात दिन मै १० बर्ष कम उमेरको देखिने यस्तो छ घरेलु उपाय
January 19, 2018	Comments Off on सात दिन मै १० बर्ष कम उमेरको देखिने यस्तो छ घरेलु उपाय
के तपाई आफ्नो उमेर कम देखाउन चाहनुहुन्छ त्यो पनि १० वर्ष कम । हो जापानी महिलाहरुको आकर्षक र मुलायम छालाको रहस्य जुन वर्षौ देखि लुकेको थियो त्यो हो चामल,जुन हामिले दैनिक रुपले खाने गर्छौ । हो, हामिले आफ्नो भान्सामा नै बसेर खाना बनाउदै आफ्नो छालालाई सुन्दर र मुलायम बनाउन सक्छौ । न त कुनै पार्लर नै धाउनु पर्ने छ,न त …
रेप सिनपछि यस्तो बेहाल भएकी थिइन् चर्चित बलिउड नायिका माधुरी दीक्षित, सुन्दै अच्चम लाग्छ
January 19, 2018	Comments Off on रेप सिनपछि यस्तो बेहाल भएकी थिइन् चर्चित बलिउड नायिका माधुरी दीक्षित, सुन्दै अच्चम लाग्छ
बलिउड र हलिउड फिल्मका सिनहरु झट्ट हेर्दा हामीलाई धेरै सामान्य लाग्छन्। तर ति सिनहरु गर्दै निकै तनाव र समस्या हुने गर्छन्। जस्तै फिल्मका स्टन्टदेखि लिएर रेप सिन गर्दा धेरै खतरा र अप्ठयारा परिस्थितिको सामना गर्न पर्ने हुन्छ। ति घटना त्यस्ता हुन्छन् की कलाकारहरुले ति घटनाहरु जीवनभर विर्सन समेत सक्दैनन्। त्यस्ता दृश्यहरु दर्शकको मनोरन्जनका लागि कलाकारहरुले ठूलो जोखिम उठाउने गर्छन्। कथाको …
युवतीहरुले ‘प्राइभेट अंग’ कसरी सफा गर्ने ? [भिडियो] डा अचला वैद्यको टिप्स
January 19, 2018	Comments Off on युवतीहरुले ‘प्राइभेट अंग’ कसरी सफा गर्ने ? [भिडियो] डा अचला वैद्यको टिप्स
डा अचला वैद्य, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ धेरैले नुहाउनुलाई मात्र सरसफाइ भन्छन् । तर, बाहिरी सफाइसँगै यौनांगको सफाइबारे धेरैले चासो राख्नैनन् । बालिकादेखि वृद्ध महिलासम्मले यौनांग सफाइ गर्ने तरिका र महत्वबारे बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।हामीले प्रजनन उमेरका युवतीको यौनांगको सफाईबारे कुरा गर्दै छौं ।पिसाव फेरेपछि वा दिसा गरेर धोएपछि चिसैमा कट्टु लगाउँदा पानीको संक्रमण हुन्छ । फंगल इन्फेक्सन हुन्छ, जसका …
ब्लफ कलबाट लभ परेका मनोज गजुरेल र पत्नीको डिभोर्सको भित्रि रहस्य खोल्दै मीना …छोरी मेमोरिले पनि यसो भनिन्
January 19, 2018	Comments Off on ब्लफ कलबाट लभ परेका मनोज गजुरेल र पत्नीको डिभोर्सको भित्रि रहस्य खोल्दै मीना …छोरी मेमोरिले पनि यसो भनिन्
हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेल दम्पत्तिको सम्बन्ध विच्छेदको समाचारले हाँस्यकर्मी मात्रै हैन उनका शुभचिन्तक पनि आश्चर्यमा परेका छन् । मनोज र उनकी पत्नि मिनाले केही समय देखिको आपसी असमझदारीलाई समझदारीमा टुङ्गयाएका छन् । विशेष स्रोतका अनुसार मनोज र मिनासँगै दुवै पक्षको पारिवारिक सहमति र सल्लाहपछि उनीहरु व्यवहारिक, कानुनी र आर्थिक रुपमा अलग–अलग भएका हुन् । सम्बन्ध विच्छेदको कारणका बारेमा हालसम्म दुवैले मुख …
यसरी अनुहारका काला दाग धब्बा र कोठीबाट सजिलै उन्मुक्ति पाउनुस्: यस्तो सजिलो उपायबाट
January 19, 2018	Comments Off on यसरी अनुहारका काला दाग धब्बा र कोठीबाट सजिलै उन्मुक्ति पाउनुस्: यस्तो सजिलो उपायबाट
कोठ्ठिलाई छालाको अवस्थाबारे स्पष्ट रुपमा देखाउने सुचक मानिन्छ । प्राय मानिसहरुले छालामा कोठ्ठी आएको मनपराउँदैनन् । किनकी यस्ले गर्र्दा तपाइँको आकर्षण घट्दछ । कालो कोठी/दाग, एक समस्या: चिल्लो छाला भएको मानिसहरुलाई धेरैजसो कोठ्ठीको समस्या हुने गर्दछ । र उनीहरु यस्ता समस्याबाट सधैंको लागि मुक्ति पाउन चाहन्छन् । त्यसको लागि हरेक किसीमको प्रयासहरु गर्दछन् । मानिसहरु यस समस्याबाट छुट्कारा पाउन निरन्तर …
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले के खान्छन जसमा दैनिक ४ लाख खर्च हुन्छ ?
January 19, 2018	Comments Off on भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले के खान्छन जसमा दैनिक ४ लाख खर्च हुन्छ ?
यूद्धको मैदानमा होस वा राजनीतिको मैदानमा, अन्तिम घडीसम्म आफूलाई हौसला दिने तथा दुश्मनमाथि हमला बोल्ने क्रम जारी रहन्छ । भारतको गुजरातमा अहिले निकै रोचक राजनीतिक लडाइँ चलिरहेको छ । र, मंगलबार यो लडाईसँग जोडिएको प्रचारको अन्तिम दिन थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सी-प्लेनमा उडान भरेर अम्बाजीको मन्दिरमा पुगे र गुजरातको विकासको कसम खाए । उनले राहुल गान्धीले पत्रकार सम्मेलन गरेर …
सलमान र म विच के के भयो भन्न सक्दिन भन्दै यसरी सुष्मा कार्कीले आफु र सलमानको फोटो बारेमा यस्तो भनिन्
January 19, 2018	Comments Off on सलमान र म विच के के भयो भन्न सक्दिन भन्दै यसरी सुष्मा कार्कीले आफु र सलमानको फोटो बारेमा यस्तो भनिन्
अभिनेत्री सुष्मा कार्की यतिखेर सांगीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा लण्डनमा छिन्। लण्डन घुमघामको क्रममा मंगलबार एक स्टोरमा बलिउड अभिनेता सलमान खानसँग जम्काभेटको फोटो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत जानकारी गराइन्। ‘माइ लभ’ क्याप्सनसहित राखिएको उक्त फोटोमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएपछि उनले प्रतिउत्तर दिदैं लेखेकी छिन्,‘राम्रो कमेन्ट गर्नेलाई थ्याङ्क यू सो मच, नराम्रो कमेन्ट गर्नेलाई फ***यू।’ गत साता गायक कालीप्रसाद बास्कोटा र हेमन्त राना लगायतको टोलीसहित …
तपाईको हातबाट यी चिजहरु झर्यो भने सम्झिनुहोस तपाईलाई हुन सक्छ यस्तो दुर्भाग्य!
January 19, 2018	Comments Off on तपाईको हातबाट यी चिजहरु झर्यो भने सम्झिनुहोस तपाईलाई हुन सक्छ यस्तो दुर्भाग्य!
यदि हातबाट खाना वा दुध उम्लेर गयो भने हामी त्यसलाई सामान्य लिएर वास्ता गर्दैनौ। तर हातबाट खाद्य पदार्थ खस्नु ज्योतिषशास्‍त्रमा शुभ-अशुभ सङ्केतसङ्ग जोडेर हेरिन्छ। साधारण जस्तो देखिने यी सङ्केतले पनि हाम्रो भविष्यको समस्याबारे जानकारी गराउछ। दूधलाई चन्द्रमासँग जोडेर हेरिन्छ। ज्योतिषशास्‍त्रका अनुसार, दुध उम्लेर पोखिन्छ भने सुख र समृद्धिको कमी हुने सङ्केत गर्दछ। यो परीवारका सदस्यहरु बीच मानसिक तनाव बढ्ने सङ्केत …
जब शरीरमा यी ५ लक्षणहरु देखा पर्दछ तब कहिल्यै नगर्नुहोस् बेवास्ता!
January 19, 2018	Comments Off on जब शरीरमा यी ५ लक्षणहरु देखा पर्दछ तब कहिल्यै नगर्नुहोस् बेवास्ता!
शरीरको हरेक भागका बारेमा गम्भीर हुन महत्त्वपूर्ण छ। किनभने जबसम्म हाम्रा शरीरका सबै भागहरू फिट हुँदैन तबसम्म तपाईले आफूलाई स्वस्थ राख्न सक्नुहुन्न । यदि तपाईको शरीरमा शंकास्पद लक्षणहरू देखा परेमा तपाईले यसलाई बेवास्ता गर्नु हुदैन। यहि कारणले गर्दा तपाई गम्भीर बिमारी हुन सक्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा विभिन्न लक्षणहरूबाट सतर्क हुन आवश्यक छ। यसका लागी ती सङ्केतहरू पहिचान गर्न पनि सक्नु पर्दछ …
जिभ्रोबाट थाहा हुन्छ महिलाको स्वभाव, यस्तो जिभ्रो भएका कस्ता हुन्छन् ?
January 19, 2018	Comments Off on जिभ्रोबाट थाहा हुन्छ महिलाको स्वभाव, यस्तो जिभ्रो भएका कस्ता हुन्छन् ?
हाड नभएको जिभ्रो चिप्लेर कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो स्थिति पनि पर्छ। कसैकसैको जिभ्रो धेर चल्छ भने कोही शान्त रहन्छन्। यसबाट पनि थाहा हुन्छ, जिभ्रोको आकार र मोटाईबाट व्यक्तित्व झल्किन्छ। मोटो जिभ्रो मोटो जिभ्रो भएको मान्छे रिसाहा, गनगन गर्नेखालको र झगडालु हुन्छन् । यस्तो मान्छेले घरमा शासन जमाएको हुन्छ। पातलो जिभ्रो पातलो जिभ्रो भएको मान्छे धेर बोल्छन् तर यिनीहरूको हृदय सफा हुन्छ । …
केटि भगाएर काठमाडौँ छिरेका बाइसमुन्द्रे ३० तोला सुन, ५० तोला चाँदी र ७ गाडीको मालिक
January 19, 2018	Comments Off on केटि भगाएर काठमाडौँ छिरेका बाइसमुन्द्रे ३० तोला सुन, ५० तोला चाँदी र ७ गाडीको मालिक
शिरदेखी पाउसम्म सुनै सुनले सजिएका उनलाई सबैले बाईसमुन्द्रे भनेर चिन्दछन् । उनको बास्तविक नाम सुवास घिसिङ हो । शरीरभरी ३० तोला सुन र ५० तोला चाँदी लगाएर हिड्ने पेशाले उनी व्यबशायी हुन् । धनकुटाबाट अन्तरजातीय विवाह गरेपछि काठमाडौ छिरेका घिसिङ मिलिजुली बातावरण नेपाल प्रालिका अध्यक्ष हुन् । यातायात व्यवशायमा पनि शात हालेका घिसिङका ७ बस रहेका छन् । हेर्दा चलचित्रका …
Page 32 of 427« First...10203031323334»405060...Last »